सम्पादकीय सोमबार, आश्वीन १८ २०७८
लकडाउनको समयमा पनि हप्तैपपिच्छे बढेको पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य अनुसार भाडा समायोजन हुनै पर्छ । तर पूर्वसूचना विना नै अचानक गाडीमा बसेको यात्रुलाई बीच सडकमा अलपत्र पार्नुमा व्यवसायीको मानवियता र व्यवसायिकता दुबै देखिएको छैन ।
काठमाडौं । सोमबार सार्वजानिक यातायात व्यवसायीले आन्दोलन गर्दा सर्वसाधारण मर्कामा परे । सिटमा बसिरहेका यात्रुलाई ओर्लन लगाएर बीच सडकमा गाडी तेस्याएर उनीहरुले भाडा समायोजनको माग गर्दै आन्दोलन गरे । कार्यालय समयमा सार्वजानिक यातायात चढेर हिडेका उनीहरुलाई गन्तव्यमा पुग्न सकस त भयो नै बीच सडकमै गाडी तेस्र्याउँदा निजि सवारीमा रहेका यात्रुलाई समेत चपेटामा परे । गाडी सकडमा छोडेर चाबी आफूले लिएर गएपछि ट्राफिकलाई समेत यातायात सुचारु गराउन हम्मे हम्मे पर्यो ।
आजको परिस्थिति आउनमा सरकार र यातायात दुबै पक्षको दोष छ । सरकारले यातायात व्यवसायी माथी पनि ज्यादती नै गरेको छ । कोरोना महामारीले लामो समयसम्म संचालन नभएका सार्वजानिक यातायातको भाडा समायोजन गर्नु जरुरी थियो । संघीय सरकारले सामायोजनको प्रस्ताव गरेपनि प्रदेश सरकार उदासिन बनेको छ ।
लकडाउनको समयमा पनि हप्तैपपिच्छे बढेको पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य अनुसार भाडा समायोजन हुनै पर्छ । डिजेल पेट्रोलको भाउले आकाश छुँदा यातायात व्यवसायी भने पुरानै मुल्यमा कसरी संचालन गरुन् ? कत्ति त व्यवसायबाटै पलायन भएका छन् भने कत्ति ऋणमा चुर्लुम्म भएका छन् । भने धेरै व्यवसायीले स्टाफ कटौती गर्दा बेरोजगार झनै बढेको छ । कोरोना समयमा भीडभाड गर्ने गरी यात्रु नचढाउन सरकारले नै आदेश दिएको छ । सिटफुल यात्रूले मात्र डिजेल पेट्रोलको पनि मुल्य नउठ्ने गुनासो यातायात व्यवसायीको छ । यस्तोमा उभ्याएर यात्रु राख्नु भन्दा व्यवसायीलाई इन्धन मुल्यमा लचकता देखाउनु र भाडा समायोजन नै उत्तम उपाय हो ।
सरकारले समयैमा माग सम्बोधन गरेको भए सम्भवतः यातायात व्यवसायीले सडकमा यात्रुलाई अलपत्र पारेर आन्दोलन गर्ने पनि थिएनन् । यो सरकारले यातायात व्यवसायी माथी गरेको ज्यादती भयो तर, सरकारले गरेको भाडा समाजोजनमा चित्त नबुझेको झोँकमा बीच सडकमा गाडीले सडक छेक्नु चाही यात्रू र सर्वसाधारणमाथी व्यवसायीहरूको ज्यादती नै हो ।
पूर्वसूचना विना नै अचानक गाडीमा बसेको यात्रुलाई बीच सडकमा अलपत्र पार्नुमा व्यवसायीको मानवियता र व्यवसायिकता दुबै देखिएको छैन । गन्तव्यमा हिडेका यात्रुलाई गन्तव्यमा नपुर्याउनु यातायात व्यवसायीको गल्ती हो । यस्तो जनताको साथ र समर्थन कसरी पाउन सक्छन् ? निर्वाध जीवनयापन र आवतजावत गर्न पाउने जनताको मौलिक हक नै हनन गरेर सडक अवरोध पार्नु त अपराध नै हो । बरु आफ्नै ग्यारेजमा गाडी थन्काएर अन्य किसिममा सांकेतिक आन्दोलन गरेको भए सरकारलाई नैतिक दबाब पनि पथ्र्यो भने यात्रुको नजरमा पनि गिर्ने थिएनन् ।
सरकारलाई दबाब दिने अनेक उपाय हुँदाहुँदै यातायात व्यवसायीले सडकमा गाडी तेर्स्याउँदा गम्भीर गल्ती हो भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री आचार्यको सत्ता लम्बिने संकेत